प्रचण्ड नै जनयुद्धका नायक भएको कुरामा बाबुरामलाई लाग्यो शंका – Pahilo Page
प्रचण्ड नै जनयुद्धका नायक भएको कुरामा बाबुरामलाई लाग्यो शंका
१८ श्रावण २०७७, आईतवार २१:५५ 659 पटक हेरिएको
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराईलाई प्रचण्ड जनयुद्धका नायक होइनन् कि भन्ने शंका लाग्न थालेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका डा. भट्टराईले ट्वीट गर्दै सोध्नुभएको छ, ‘प्रचण्डको पानीआन्द्रे हर्कत देख्दा यी जनयुद्धकै नायक हुन् त ? शंकै लाग्यो ।’
पछिल्लो समय नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्र चुलिएको विवादका सन्दर्भमा ट्वीट गर्दै डा. भट्टराईले यस्तो प्रश्न गर्नुभएको हो । ‘पद स्वेच्छाले छाडेर निकास दिन आग्रह’ रे !’, नेता भट्टराईले शंका व्यक्त गर्नुभएको छ, ‘भोलि ओलीका चरणमा धूपबत्ती गर्ने हो कि ?’
नेता भट्टराईले अगाडि थप्नुभएको छ, ‘ओली बरू आफ्नो निरंकुश र फासिष्ट सोच÷अडानमा दृढ देखिए । लुई चौधौंले क्ष् बm तजभ कतबतभ भनेझैं ओली हाकाहाकी क्ष् बm तजभ एबचतथ भनिरहेछन् । तर प्रचण्डको पानीआन्द्रे हर्कत देख्दा यी जनयुद्धकै नायक हुन् त ? शंकै लाग्यो !’